Ngaba ucinga ngokuhamba kwibhulorho elandelayo? | Ukuhamba kwe-Absolut
Ngaba ucinga ngokuhamba kwibhulorho elandelayo?
Ukuhamba kwe-Absolut | | Prague, eRoma
Ukuba ungumhambi onomdla, mhlawumbi sele unamehlo kwi ibhulorho yanovemba. Ukubuyela kwinkqubo yesiqhelo kunye nemini kubonakala kunzima kakhulu xa usazi ukuba ngexeshana elincinci uyakonwabela ukuphuncuka kwakhona okuvumela ukuba uphinde ubuye neemvakalelo eziveliswa kukuhamba.
Ngamanye amaxesha akukho lula, ehlotyeni sichitha isixa semali esibi kakhulu kwizinto ezingaphezulu esinokuziphepha ngokugqibeleleyo. Kodwa isilingo sikhona, kwaye iithala kunye neetapas kunye neebhiya uninzi lweentsuku zithatha umthwalo wazo. Ke njalo sijonga izibonelelo, izaphulelo side sifunde kuzo uyifumana njani imali-mboleko ukuqhubeka nokuhamba.
1 Iingcebiso zokunciphisa iindleko kuhambo lwakho olulandelayo
2 Fumanisa iYurophu kwibhulorho kaNovemba
Iingcebiso zokunciphisa iindleko kuhambo lwakho olulandelayo
Con i-viaconto, Inyaniso kukuba yonke into ilula, nangona kunjalo siza kukunika imikhondo malunga nokuba yeyiphi iinjin yokukhangela oza kuyisebenzisa, usetyenziso, amakhadi etyala, amaqhinga okufumana ukuhlala kunye nohlahlo-lwabiwo mali oluphantsi, njl.
Ingcebiso yethu yokuqala yenye yezona zibalulekileyo. Kuyakukunceda ugcine kwaye ukwazi ukuphila uhambo oluhamba rhoqo kunye neendlela zokubaleka kunokuba ubucinga ... Ingcebiso yile yiba ngqwabalala, le yeyona mfihlo igcinwe kakuhle kubo bonke abahambi abakumgangatho ophakathi. Siphila kuluntu oluzele yiminqweno kunye nezilingo ezithatha iingqondo zethu kwaye siphela sithenga izinto ezingeyomfuneko kwaphela. Ukuba uthatha isigqibo sokunciphisa izinto ozithandayo, ayizukuba lula, kodwa uya kubona ukuba uza kuyigcina ngokukhawuleza njani kwaye uyonwabele ngakumbi indlela yokubaleka.
Izicelo ozifunayo ewe okanye ewe kwi-smartphone yakho. ISkyscanner yinjini yokukhangela yexabiso eliphantsi ngokugqwesa. Inika okwahlukileyo okuninzi kwaye okona kulungileyo kukuba unokukhangela inyanga ofuna ukuhamba ngayo kwaye ubone ukuba loluphi usuku olusezantsi. Kubalulekile ukuba uchithe ixesha ukhangela inqwelomoya efikelelekayo, kuba zihlala zizezona zibiza kakhulu kuhambo lwakho.
Olunye usetyenziso oluluncedo olungasoze luphele kwifowuni yam Imephu yeMephu. Isicelo nje esifana nemephu zikaGoogle kodwa sigqibe ngakumbi. Iti khuphela imephu oyifunayo kwaye wakukhuphela ungayisebenzisa ngaphandle kweintanethi kwaye isebenza kakuhle. Esi sicelo sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhangela ezinje ngeehotele, iivenkile zokutyela, amanqaku anomdla kuloo ndawo, njl. Undivuthela nje kude.
Kwaye okokugqibela ngaphakathi kokubalulekileyo, ukubhukisha kunye neAirbnb. Ezi zizicelo zokufumana indawo yokuhlala kwaye zisebenza ngokumangalisayo. Ungalungiselela uphando lwakho ngokweemfuno zakho kwaye uya kubona ukuba iziphumo azizukuphoxisa. Enye yeengcebiso zam kukuchitha ixesha ukukhangela indawo yokuhlala, njengakwimeko yeenqwelo moya, Ukufumana izisulu zokwenyani ngumcimbi wexesha kunye nentwana yethamsanqa. Ewe, njengoko benditshilo, khetha usuku kwaye uqalise ukukhangela indawo yokuhlala. Qaphela! Ungaze uhlale kuphela neziphumo zokuqala, uskrole kwaye uza kubona ukuba ukubonelela okungcono kubonakala njani ngaphakathi kwesicelo emva koko. Khumbula ukuba ukhetho oluvela kwindawo yokuqala luye lwanyuswa ukuba lube kwizikhundla zokuqala kwaye azisoloko zingabizi kakhulu. Ngamanye amaxesha kuyanomdla ukuthelekisa amaxabiso ngokuthe ngqo kwihotele, yazi ukuba ezi ntlobo zezicelo zibiza ipesenti kulawulo, ngamanye amaxesha ihotele inikezela ngamanye amaxabiso okanye nokunyuselwa okukhethekileyo.
Ndiphantse ndalibala! Kuxhomekeka kwilizwe ohamba kulo, Kuya kufuneka unikezele ngotshintsho lwemali. Injani le mali xa kuthelekiswa ne-euro, iindleko zokuhlala esixekweni ojonge ukufumanisa ... Kubalulekile ukuba uyifunde le ndawo kancinci ukuze kungabikho nto ikothusa. Kwimeko yotshintshiselwano lwemali, sicebisa ukuba kusetyenziswe ikhadi elilungeleyo ngezi zihlandlo, zininzi, kodwa eyona nto ibalaseleyo kukugqwesa. Ngombulelo kuyo unokwenza ugqithiso kwikhadi lakho, kwikhadi le-Bnext kwaye urhoxise imali ngekhomishini encinci kuwo onke amazwe, ikwahlala likwelona nqanaba liphezulu lonaniselwano. Enye into enomdla kakhulu kukuba ungalivimba kwaye uphinde ulisebenzise ikhadi lakho kwiselfowuni yakho ukuba uhamba kwiindawo ezivelisa ukungathembani okanye ufuna nje ukuyivimba xa ungafuneki ukuyisebenzisa.
Ingcebiso elungileyo, huh? Kumaxesha athile okuhamba, ezi ngcebiso azikho nto intsha, okanye mhlawumbi zikhona, kodwa ndisenethemba lokuba ungazisebenzisa iingcebiso.
Fumanisa iYurophu kwibhulorho kaNovemba
IRoma yindawo ekungaze kudanise kuyo
Ngokwam, kwimpelaveki ka-Novemba, ndikhetha amazwe kunye nezixeko ezinomtsalane kodwa kwangaxeshanye azikho kude kakhulu. Oko kukuthi, ukuba uneentsuku ezimbalwa, ayiloxesha lokuhamba uhambo olude ngaphandle kokuba uqala i-adventure enkulu ngaphandle kwetikiti zokubuya. Ewe, ngo-Novemba, sincoma ukuhamba eYurophu Ngaphandle kwamathandabuzo, nazi iziphakamiso:
Balekela eBelgium kwaye wonwabele iBrussels, iGhent neBruges kuhambo olufanayo.
Budapest, indawo engumfuziselo ngokukodwa. Nxila kumtsalane wayo.
Ndwendwela umlingo onqabileyo, hamba ngentsomi kubomi bokwenyani.
La iRoma yamandulo engazange ibe luluvo olubi, egcwele inkcubeko yokutya kunye noyilo oluhle.
Ukuza kuthi ga ngoku izindululo zethu zebhulorho elandelayo ngo-Novemba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ngaba ucinga ngokuhamba kwibhulorho elandelayo?
Yintoni ekufuneka ujonge kuyo ukurenta ikharavani?